प्रिमिएर लिगका यी ५ खेलाडी जसले यस सिजन बालोन डी’ओर जित्न सक्छन !! - Experience Best News from Nepal
यूरोपियन फुटबल लिग खेल समापन भएको छ, ला लिगाको उपाधि बार्सिलोना, ८ औ पटक सिरी ए युभेन्ट्स, लिग १ कब्जा पी.एसजी, ड्रोटमण्डलाई छाडेर बायर्नलाई बुन्डेसलिगा र लगातार दोश्रो पटकको इंग्लिश प्रिमिएर लिग म्यानचेस्टर सिटीले जितेको छ । लिग खेलको समापनसंगै खेलाडी स्थान्तरणको चर्चा त छदै छ संगै बालोन डी’ओरको सम्भावनाको विषय समेत चरममा रहेको छ ।
दशक देखि रोनाल्डो मेस्सीको बालोन डी’ओर प्रतिस्पर्धा कायम नै रहेको छ भने रोनाल्डोको सम्भावना घट्दै गर्दा मेस्सी अझै दावेदार देखिएका छन् ।
विश्व फुटबलको ध्यान हाल प्रिमिएर लिगमा मौलाइरहेका खेलाडीमा गएको छ र प्रिमिएर लिगमा चकिएका यी विभिन्न खेलाडीले समेत यो पालीको बालोन डी’ओरका निम्ति प्रबल छाप बनाएका छन् । दशक लामो इतिहासमा प्रिमिएर लिगका खेलाडीले बालोन डी’ओर जितेका छैनन ।
समयले बताउला तर के यो साल बालोन डी’ओर प्रिमिएर लिगका यी हस्ती मध्य एकलाई जाला ??
प्रिमिएर लिगका यी ५ खेलाडी जो अन्तिम ३ मा सम्भावना बनाउन सक्छन :
#५ एडेन हाजार्ड
पाच बर्ष यता प्रिमिएर लिग हिरो हाजार्डले प्रिमिएर लिगमा निकै राम्रो छाप छोडेका छन्, सुरुवात भन्दा अन्तमा हाजार्डको खेल निकै निखारिएको पाइयो । हाजार्डले यस सिजन १९ गोल पूर्ण क्लब खेलमा गरेका थिए भने १६ गोल प्रिमिएर लिगमा गरेका थिए । १५ एस्सिस्ट समेत गरेका हाजार्डले यस सिजन पूर्ण ३१ गोल गरेका छन ।
चेल्सी हाल प्रिमिएर लिगमा तेश्रो स्थानमा अवस्थित छ । यूरोपा लिगको जित हाजार्डका निम्ति बालोन डी’ओरका दावेदार मान्न सकिन्छ ।
#४ सादियो माने
प्रिमिएर लिगमा लिभरपूल १ अंकले सिटी पछाडी रहन पुग्यो भने सादियो मानेले प्रिमिएर लिग गोल्डेन बुट जित्न सफल भएका थिए । साथै औबामेयांग र मो. सलाहले समेत गोल्डेन बुट जितेका थिए ।
गोल कर्ताको आधार सादियो मानेको यो सिजन निकै सुखद मान्न सकिन्छ, उनले ४९ खेलबाट २६ गोल गरेका थिए । गोल एस्सिस्टमा भने उनको एक एस्सिस्ट मात्रै रहेको थियो जुन निकै कम्जोर साबित हुन्छ । जर्जेन क्लोपको अट्याक तिनका एक हुन सादियो माने जुन क्लोपका निम्ति यस सिजन उत्कृस्ट मान्न सकिन्छ । वर्ष उत्कृस्ट खेलाडीको सुचीमा पर्नुको साथै बर्ष उत्कृस्ट खेलाडी पुरस्कारका निम्ति समेत मनोनयनमा परेका थिए माने ।
बालोन डी’ओरका निम्ति माने च्याम्पियन लिग र अफ्रिकन नेशन खेलले हकदार बन्न सक्छन ।
#३ मोहमद सलाह
लिभरपूल स्टार मोहमद सलाह पुन दोश्रो पटकका प्रिमिएर लिग गोल्डेन बुटका हकदार बनेका छन्, पहिलो सिजन नै सलाहले प्रिमियर लिग गोल्डेन बुट जितेका थिए । एक सिजनको हुनर भनेर विभिन्न ट्रोल खेपेका सलाहले पुन दोश्रो सिजनमा जादुयी खेलाडी यापन गरे । ५१ खेल खेलेका सलाहले २६ गोल गर्दै १० एस्सिस्ट गरेका छन् । टाइटलको दौडमा अद्भुत भूमिका खेलेका सलाहले बालोन डी’ओरको हकका निम्ति अन्तिम ३ कअ निम्ति निकै दावेदार देखिन्छन ।
च्याम्पियन लिग फाइनल मड्रिडले सलाहको बालोन डी’ओरको सम्भबना बढ्ने हुदा सलाहको खोजि गोलमा हुनेछ ।
#२ राहीम स्टार्लिंन्ग
राहीम स्टार्लिंन्ग प्रिमिएर लिगमा एक उत्कृस्ट खेलाडीका रुपमा स्थापित भएका छन । घरेलु लिगको उपाधिसंगै राहीमले विभिन्न व्यक्तिगत पुरस्कारबाट सम्मानित भैसकेका छन् । सिटीबाट ५१ खेल खेलाडी उनले २५ गोल गरेका थिए भने गत बर्षको हकमा उनले ४६ खेलमा २३ गोल गरेका थिए ।
प्लेयर अफ द यिअर अम्तार्गत उनले योंग प्लेयरको अवार्ड जितेका थिए, तिन ट्रफी दौड अन्तर्गत उनको भूमिका तिन ट्रफी प्रिमिएर लिग, एफ ए कप र काराबो कपमा विशिष्ट थियो ।
तिन ट्रफी जितका हकदार रहेका उनि बालोन डी’ओरका निम्ति समेत अन्तिम ३ का ठुला हिस्सा बन्न सक्छन ।
#१ भर्जिल भ्यान डाइक
बालोन डी’ओरका सुखद सुचीमा लिभरपूल डिफेन्डर भ्यान डाइक प्रमुख मानिएका छन् । विशिष्ट डिफेन्स र उत्कृस्ट प्रिमिएर लिगले भ्यान डाइक बालोन डी’ओरका प्रबल दावेदार मानिएका हुन् । डच खेलाडी भ्यान डाइक रेड्सका सेन्टर दिफेन्डर हुन् । मार्च २०१८ पश्चात कुनै एक खेलाडीले भ्यान डाइकबाट बल खेलाएर बल अगाडी बढाउन सकेनन ।
उनले पप्रिमिएर लिग उत्कृस्ट पदर्शनसंगै प्रिमिएर लिग प्लेयर अफ द यिएर घोसित भए । जोन टेरी चेल्सी डिफेन्डर पश्चात उनले नै एक डिफेन्डर भै प्लेयर अफ दि यिएर जिते ।
भ्यान डाइक बालोन डी’ओरका हकमा निकै उचाईमा छन् र च्याम्पियन लिगको जितले निकै फरक पार्न सक्ने देखिन्छ ।
हाजार्ड र रियल सम्झौता नजिक !! रियलले अन्तत १३० मिलियनमा सहमत गर्दै
Ballon d'OrEden HazardMohamed SalahRaheem SterlingSadio ManeVirgil van Dijk